I-Experience of Chosen For
Indlela Yokukhethwa Kwenziwe Ngokwempahla kwi "Today Show"
by UTomen Tennant
Isikhokelo sakho sokufumana i-Makeover evela kumntu owenziweyo!
Ngaba unganqwenela ukuba uthathelwe enye yezo zivunguvungu ezivakalayo ozibonayo kwimiboniso yasekuseni nasemini? I-Today Show Plaza kwiSixeko saseNew York enye yeyona ndawo ihamba kakhulu kunokuba ibe nethuba lokubonakala kwi-"Incover Makingover".
Indlela Omnye Umfazi Oye Wahlala Ngayo "Ukunyusa Kwamandla"
Ngaba wayesazi ukuba ezo zenzeko aziyiyo njengezenzekelayo njengoko ucinga? Inyaniso kukuba, unakho ukukwazi ukubeka ipakethe, ngoko kuthetha, ngoko nguwe okhethiweyo.
Yileyo ndlela uBrigette Dineen, umongikazi obhalisiweyo wase Cleveland, eOhio, waya kwintyelelo yakhe kwi " Today Today Show " kwaye wambeka indawo kwi-Today's "Impush Makeover".
"Andizange ndiyazi ngaphambi kwexesha ndiza kukhethwa," utsho. "Kodwa ndijonge le nxalenye rhoqo ngoLwesine, kwaye ndenze umsebenzi wam wesikolo ngaphambi kokuba ndiye kwi-show. Ndaqala ngokuphanda i-intanethi ukufunda ixesha kunye nendlela abakhetha ngayo izifundo zabo zokubuyisela kwaye apho indawo efanelekileyo yokuma kwi -Today Show Plaza yayiza kuba. "
UBrigette nomyeni wakhe uBrian Dineen bahamba baya kwiSixeko saseNew York ukugubha isigqibo seBrigette kwisikolo soohlengikazi. Ukwenziwa ngaphaya kweLouis Licari kunye noJill Martin kwakukuphela kwesitya kwi-intetho yakhe ye-windwind. Kodwa yayiyinto enomdla kakhulu kunye nalowo ayeyilungiselele ngaphambili.
Nazi iziphulo ezi-9 zeBrigette malunga nendlela yokukhethwa ngayo "Ulungelelaniso oluthileyo " kunye noko kufuneka ulindele xa kwenzeka .
1. Yiya kwiPlaza yasekuqaleni
Sibeka i-alamu yethu ngo-5: 30 ekuseni ngenxa yokuba ndifuna ukuya kumgca kwi -Today Show Plaza ngo-6.
Xa savuka, kwakunamvula, kwaye sasikhathele, kodwa ndandibhuqa ngaphandle kombhede. Ndandivuya ngokufihlakele kwaye kubomvu ngenxa yokuba ndiyazi ukuba kuya kubangela ukuba abantu bangabikho. Emva kwakho konke, sasiseNew York ngoLwesine ngokukhethekileyo ngenxa ye "Ushintsho olungenayo!"
Silinde malunga nemizuzu engama-20 ukuba singene kule ndawo kunye nemigca kunye ne "Today Show" amabhanki awubonayo kwiTV.
Kufuneka uhambe ukhuseleko ukuze ufike kwindawo apho ababukeli bebona abaphulaphuli bemi ngaphandle. Kwakukho ukhululekile "Namhlanje Bonisa" imvula ye-ponchos ekhoyo. Ukuba ungenayo ibhanna, akukho nkxalabo. Babenalo iphosta ebhokisini yokwenza iifowuni zakho.
2. Musa ukukhangela mhle
Andizange ndenze nto ngaphandle kokuba ndihlambuluke, hlamba ubuso bam uze ubeke iintloko zam kwi-ponytail - kunye nesizathu esihle. Ukuba ukhangeleka kakuhle, abayi kukukhetha.
3. Yenza Iyazi ukuba Ukhona I-Makeover
ULouis Licari waphuma waya ePalaza malunga ne-7 ngomhla kwaye waqala ukukhangela izifundo ezingaphumelela. Akukho mntu wayebonakala embona, ngoko ndamemeza "uLouis!" kwaye wafika waza wathetha nam. ULouis noJill Martin benza i-makeovers; ULouis wenza izinwele kunye noJill uvala.
Ndamxelela ukuba ndingumdlali omkhulu kwaye, ngokwenene, ndandifuna i-makeover. Wathetha nabanye abafazi abambalwa okwangenza ndandipha.
Xa uJill ephuma, wabuya wathetha nam, naye. Wandibuza ukuba ngaba ndiyintombazana eyathumela i-imeyile, kwaye ndathi, "Hayi." Ndandisoyika ukuba ndiza kulahlekelwa yintombazana eyathumela i-imeyile.
Kodwa wabuya waza wanginika i-makeover, endiyithandayo. Bambuza uBrian ukuba ulungile yini, kwaye wathi, "Ndiqinisekile ukuba ndingena ngaphakathi." Wayesengumdla kakhulu malunga nenkqubo yonke kule ndawo.
4. Hone Izakhono zakho zokuSebenza
Xa usamkelekile, kusasa kusasa, kufuneka uphinde wenze inkqubo yonke yeekhamera. Qinisekisa ukuba wenza into emangalisa, njengokungathi bayinikela okokuqala ngqa, nangona usuqalile ukutywinisa le ngxelo.
Qaphela Umlingani Wakho
Bathi bangena ngaphakathi ukuze baxoxe nge-intanethi kwaye ke xa ndiphulaphula iindaba kuBrian ukuba uza kuthetha ngekhamera.
Ndathi, "Ngendlela, baya kukubuza ukuba kutheni ndifanele ufumane i-makeover, ngoko nje ndithi ndingumama olungileyo kwaye ndisebenza nzima kwaye zonke izinto." Emva kwemizuzwana engama-30, babedula imakrofoni ebusweni bakhe.
Kwakungcono ngale ndlela, wayenalo ixesha lokuba neentloni.
Emva koko bahambisa abayeni baphuma emvula baze batshabalalisa uVanessa - umfazi waseTexas naye ufumana i-makeover-kwaye ndihambe kwiiyure ezintathu zokuhamba.
6. Ungavumi Ukuvakalelwa Kwakho Imvakalelo
Okokuqala, sangena kweli gumbi nazo zonke ezo mpahla, kwaye uJill wasifakela eSpanx waza wasenza ukuba sizame kuzo zonke ezi zambatho. Ukhululekile kakhulu. Wayeya kuthi, "Ndiyayithiya loo nto," okanye, ngakumbi, "Umzimba wakho ubonakala umangalisa ngaloo nto."
UJill wasibuza oko sasicinga kodwa, ekugqibeleni, wakhetha oko wayefuna ukuba sinxibe. Zizo zonke izibuko ezihlanganiswe kuyo yonke le nkqubo ukwenzela ukuba uthembele kubo kwaye wenze oko bathethayo.
7. Yimangaliswa yiQela leNzame
Ngoku, uLouis uphethe iinwele kwaye uJill uthabathe ingubo kunye nezixhobo, kodwa baneqela elisebenza nabo kwaye wonke umntu ngu- NICE WE-SO . U-Enid, owenza i-makeup, akafumani uzuko-emoyeni, kodwa umnandi kakhulu kwaye uhle. Wayemangaliswa yindlela yam yobuhle ("Awusebenzisi i-moisturizer ?!"), kodwa ukhuthaze kwaye, ngokunyanisekileyo, lukhulu kakhulu.
Omnye ubeka imibala kwizinwele zakho, omnye umntu uyayinqumla, u-Enid ubeka i-makeup yakho-kwaye konke kwenzeka ngexesha elinye. Njalo kanye ngexesha elithile, mna noVanessa sasijonge omnye nomnye ngathi "ngaba oku kwenzeka ngokwenene?"
Emva koko, iinwele kunye nokuzenzela kwenziwa kwaye sasisayi kubeka iingubo. Ngeli xesha, baye bathabatha iingubo kunye nezicathulo. Njengoko sasilindile emva komnyango ukuba sihambe siye kwi-studio ukuba enkulu ibonakaliswe, bebebeka umzuzu wokugqibela uthintela kwiinwele zethu kunye nokuzenzela. U-Enid wasinika i-spray tan ngokukhawuleza ukusuka ngamadolo kuphela. Eli xesha lonke, wonke umntu ovela kubavelisi ukuya kubafundi abaya kwiqela le-recover wayesitshela ukuba sibonakala sihle.
8. Khumbulani abo bafundisayo izifundo? Isikhathi Sokukwenza kwakhona!
Baqhubeka bexelela ukuba babe ne-real-but-animated-reaction. Ndazi oku ngokubukela ekhaya. Uyayithiya xa umntu engabonakali umxhonywe ngetshintsho. Ufuna ukuba bajabule.
Ndineeyure ezintathu ukuba ndivuselele indlela yam yokusabela ngayo, kodwa emva kokuba umnyango uvule kwaye ukhona kwisikrini, konke kuphuma ngefestile.
Ndandisekwa nguHoda Kotb kunye noKathie Lee Gifford kwaye ndisoloko ndothuswa yimeko yonke. Ngokukhawuleza ndakwazanga ukucinga ngenye yezinto ezintle, ezintle izinto endazithethayo.
Emva koko yonke into iphelile kwimizuzu embalwa. UHoda noKathie Lee basinika ukuxhaphaza ngokukhawuleza (okanye ukukhupha? Andinakukukhumbula nakhona) kwaye bebekwe kwisigaba sabo esilandelayo kunye nendawo. Zihle ngomntu kwaye zibonakala zihle kakhulu, kodwa awukwazi ukuthetha nabo.
Ndandisoloko ndicinga ukuba ama-women's makeover ahlala phantsi kwaye mhlawumbi abe neglasi yewayini kunye noKathie Lee noHoda, kodwa akukho nhlanhla.
9. Isigqibo sokugqibela: Shintsha okanye Ugqoke ingubo?
Ndazigcina iingubo, kodwa zabuyisela izicathulo kunye neengubo. Kwaye kuloo nto, kufuneka uthathe isigqibo sokuba ufuna ukubuyela ehotele yakho kwisambatho esinobucayi kunye nezicathulo zokugijima okanye utshintshe kwiingubo ezinamafutha ozigqoke khona.
Andikwazanga ukubulela amaqela okubuyisela ngokwaneleyo. Emva koko, sasiphuma esitratweni, isihlwele sasiye kwaye yonke into yayiphelile.
Kwakuyimvunguvungu kwaye, ngokungathandabuzeki, ngaphaya kweliphi na elilindelekileyo kumava. Kwayimangalisa kwaye imnandi kwaye i-surreal kwaye ndihleli, emva koko, ukutshatyalaliswa ngokupheleleyo kwinto yonke.
Kwakuyinto yam endiyithandayo imihla endiyenayo ebomini bam.
Indlela yoPhicotho lwe-Masterchef
Indlela yokufumana ithikithi yamahhala kwi-'Late Show ngeStefano Colbert '
'Iminithi Yokuyinyusa' Imidlalo yeKrisimesi
Ngubani ofuna ukuba yi-Millionaire Phone-a-Friend Lifeline
Iyona nto ibonayo yokuBonisana nokuThatyathwa kwee-2000s
Indlela yokufumana i-Oprah Winfrey Bonisa iiTikiti
Funda malunga nabagwebi bevela kwi-NBC TV Show "I-Americas's Talent Talent"
"Namhlanje" Bonisa iiMikhosi ezidlulileyo kunye Nathi
"I-America's Next Model Model" Abaphumeleleyo
'Imfutshane yokuYinqoba' iPenny Hose Game
Uthando lwe-Aries kunye neCapricorn
Dragons, Demons kunye Naphezulu: Isikhokelo seBuddhist Temple Guardians
Indlela yokubiza igama leSenzhen, enye yeedolophu ezinkulu zaseChina
I-Austin Peay State University Admissions
Amaqiniso Ngomntu we-Olympian - uHermes
Yintoni Ukuxolelwa NgokweBhayibhile?
Yintoni i-American English (AME)?
Iimpawu zoMhleli Olungileyo
IQela leQumrhu leBolley: Indlela yokukhokela iqela lakho
Umxube Inkcazo kunye neMimiselo yeSayensi
Imbali ye-African-American Folk Music
Iingoma ezi-10 eziphambili zeStame zeSetown ze-All-Time
Indlela yokudibanisa "umrhumo" (ukunikela)
Imfazwe Yehlabathi II: I-USS Wasp (CV-7)
Kutheni i-'Ace 'Enye yeGolane yezona ziPhambili ziPhumelelo
IYunivesithi yaseDenver (DU) Ukwamkelwa
Ukuqonda Inkqubo yeBretton Woods
I-Golf Puns, i-One-Liners kunye nezinye zihleka ngokukhawuleza
Imiyalelo yePlanga esuka kwiMdlali oyiNtloko
Ukwahlula: Inkcazelo ngeemizekelo
Yintoni i-Market Market yamahhala?
I-albhamu eziphezulu ze-Krautrock